Ungayihlobisa kanjani ngobuciko ifulethi ngamaholide kaNcibijane usebenzisa izicucu eziseduze - Indlela yokuphila 2022
Ungayihlobisa kanjani ngobuciko ifulethi ngamaholide kaNcibijane usebenzisa izicucu eziseduze
Ingabe ufuna ukuletha isimo semikhosi endlini yakho, kodwa awunaso nhlobo isikhathi esanele?
Thatha isibonelo kulaba bantu abanobuhlakani! Babekwazi ukuhlobisa amakhaya abo ngoKhisimusi nangoNyaka Omusha, besebenzisa, ngomqondo ongokoqobo, lokho okwakuseduze.
Ungagcina emihlobiso yoNyaka Omusha, uma ufisa. Vele ungeze izesekeli zoNyaka Omusha kulokho okusele ngemva kwamaholide okugcina.
UKhisimusi ugujwa ezindaweni eziningi emhlabeni ngoDisemba 25. Into esemqoka ukusondela endabeni yokuhlobisa ifulethi ngobuciko.
Zizwe ukhululekile ukusebenzisa izinto onazo. Abasebenzi basesibhedlela baphinde bazama ukuhlobisa ingaphakathi likaNyaka Omusha … ngezinyamazane ngezinduku.
Alikho iqhwa ngaphandle? Kukhona indlela yokuphuma!
Usayizi akusho lutho. Into esemqoka ukuthi kukhona isihlahla sikaKhisimusi efulethini!
Manje sekuyithuba lakho lokuhlobisa ifulethi ngoNyaka Omusha!
Ungazigcina kanjani uphilile ngaphandle kwejimu nabaqeqeshi
Sekuyisikhathi eside kwaziwa ukuthi ukuhlala usesimweni esihle somzimba akunakwenzeka ngaphandle kokunyakaza, kodwa ngezinye izikhathi isimiso sethu asibandakanyi ukuya ejimini. Ungayithola kanjani enye indlela, kusho u-Inna Miroshnichenko
Indoda yami iyahaha noma cha - kanjani ukunquma? Izenzo Zakhe Eziyisi-7 Ezingenakuthethelelwa
Ungashintsha kanjani yonke into lapho usuzuze okuthile, kodwa ungazizwa ujabule
Ukucindezela okuphansi noma okuphezulu - okuyingozi kakhulu nokuthi ungabhekana kanjani nale nkinga?
Uyini umfutho wegazi ophezulu? Ingayilimaza kanjani impilo yakho? Wazi kanjani ukuthi une-hypertension? Yini eyingozi kakhulu - ingcindezi ephezulu noma ephansi? Le mibuzo yaphendulwa udokotela wenhliziyo